Nilaozam-bady i Putin & Tapa-tsinay ny RuNet · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2013 23:26 GMT
Nahatonga resabe io fanambarana io rehefa nitsofoka tanatin'ny tontolon'ny aterineto Rosiana, na dia nitovy tamin'ny fahatairan'i Italia tamin'ny fangalaram-pitian'i Berlusconi teo amoron'ny rano filomanosana nandritra ny volana vitsy farany nitondrany aza ny fahatairan'ireo mpitoraka bilaogy momba ity raharaha ity. Na dia voatana ho tsiambaratelo tsara aza ny fiainana manokan'i Putin, nandeha ny tsaho nandritra ny taona maro fa misedra olana ara-panambadiana ireto mpifankatia roa ireto, ary nalefa hiaina an-jatony miles lavitra i Lyudmilla (hitazona akanin-jazavavy, tsy latsaka izay), ary i Putin kosa nanana olon-tiana hafa nanintona azy tetsy andaniny. Hita tanatin'izany tsaho izany i Alina Kabaeva, ilay gymnaste nahazo medaly volamena tamin'ny Olaimpika lasa solombavambahoaka ao amin'ny Douma, izay antsasaky ny taonan'i Putin, nefa rehefa nisy tabloïd tao Môskoa nanadihady izany voalaza ho fiarahana izany tamin'ny 2008, tonga dia voakatom-bava avy hatrany.
Miverina an-tsain'ny maro indray izao ny anaran'i Kabaeva. Nanolotra [ru] ny teny ofisialin'ny Kremlin ny mpitondra tenin'i Putin, Dmitri Peskov, raha niresaka tamin'ny fanaovan-gazety Rosiana LiveNews, “Tsy zava-miafina izany ary mahafantatra ny rehetra fa efa hatramin'ny ela i [Putin] no nanolo-tena ho an'ny firenena—na mieboebo aza ny fahenoana izany.”
Tsy misy fampahalalana nivoaka hanohana ireo vinavina ireo, nefa misy zavatra iray kosa azo antoka: efa misedra fahasahiranana sahady biraon'ny Kremlin mpifandray amin'ny fanaovan-gazety amin'ny fanandratana ny endrik'i Putin ho mpitondra manokan-tena ho amin'ny hasin'ny fianakaviana—endrika iankinan'ny firaisany mafy amin'ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana. Angamba fambara ho an'ny zavatra hitranga, fa nanoratra am-pânesoana i Alexey Navalny (izay mikasa hifaninana amin'ny fifidianana ben'ny tanana ao Môskoa ary manonofy ny toeran'ny filoham-pirenena) :
Miaraka amin'ireo esoeso mahazo an'i Vladimir Putin, mahaliana ny fahitana ny fitserana azon'ilay vadin'ny filoham-pirenena taloha (tsy ho ela) avy amin'ireo mpampiasa aterineto, raha tsikaritra fa efa zatra mitanty tifitra ato anaty Aterineto ireo manodidina an'i Putin. Ho an'ilay mafana fo momba ny tontolo iainana, Yevgenia Chirikova, bitika dia bitika ny faharatsiam-bitan'ny Lyudmila Putina raha oharina amin'ny an'ny Rosiana manontolo:
Nisy sary iray nozaraina tao anaty aterineto (jereo etsy ambony) naneho fampifandraisana sary roa: Atoa sy Rtoa Putin nandritra ny fanadihadiana azy ireo taorian'ilay fandihizana, ny eo anilany kosa dia sarinà mpitandro filaminana ao amin'ny FSB nisambotra olona. Nanoratra i Fake_MIDRF :
Anatin'io fotokevitra io ihany, nivazivazy ilay mpampiasa Twitter, Mitya Aleshkovsky, izay naneho faniriana ankolaka:
Antony iray hafa voaresaka koa ny vinavina momba ny fangatahan-dRtoa Putina ny harem-be manokan'ny Filoham-pirenena. Ny lalàna Rosiana dia mametraka fa antsasaky ny harena nangonina tao anatin'ny fanambadiana no an'ny vehivavy—izay, raha ampivadiana amin'ny endrik'i Putin ao anaty aterineto ho toy ny filohan'ireo “mpisoloky sy mpandroba,” dia nampiakatra ny masirasira eo aminy. Nisy namerina nitoraka bitsika maherin'ny 1.050 ilay lahatsoratra maneso avy amin'ny KermlinRussia:
Raha tsy jerena ireo vazivazy ratsy, nisy fanekena niraisana na dia kely aza fa, aorian'ny fiatoana kely mandritra ny fotoana fohy hanamarihana ny fahalasanan'ny vadin'ny filoha, hiverina amin'ny asany andavanandro indray ny Kremlin. Naneho ny tsy hafaliany i Ilya Yashin anatina bitsika iray izay manamarika ny fahafaham-pon'i Lyudmila ny amin'ny fanaovana io fisarahana io ho “fisarahan'ny olo-mandroso”: